Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » साहित्यको बारेमा निर्मला स्नेहीसँग लिएको अन्तर्वार्ता
साहित्यको बारेमा निर्मला स्नेहीसँग लिएको अन्तर्वार्ता
२०७७ भदौ १३ गते शनिवार ११:५०
पछिल्लो समयमा नेपालीमा साहित्यमा धेरै नयाँ प्रतिभाहरू उदाएक छन् । प्राथमिककाल, माध्यमिक काल हुँदै आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा नेपाली साहित्यले निकै फड्को मारेकोे छ । नेपाली साहित्यमा कथा, कविता, उपन्यास, गजल हायकु जस्ता विधा फस्टाएका...
पछिल्लो समयमा नेपालीमा साहित्यमा धेरै नयाँ प्रतिभाहरू उदाएक छन् । प्राथमिककाल, माध्यमिक काल हुँदै आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा नेपाली साहित्यले निकै फड्को मारेकोे छ । नेपाली साहित्यमा कथा, कविता, उपन्यास, गजल हायकु जस्ता विधा फस्टाएका छन् । साहित्यमा जति नयाँ स्रष्टाहरूको प्रवेश भएको छ उति नै विकृति विसंगति पनि बढेको छ । नेपाली साहित्यमा एम.एम सकाएर फूलजस्ता कलिला नानीहरूलाई देश पढाइरहेकी निर्मला स्नेहीसँग लिएको अन्तर्वाता
(क) तपाईँको पछिल्ला दिनहरू कसरी वितिरहेका छन् ?
उत्तर ः चैत ११ गतेबाट देशमा लकडाउन भएको छ । त्यसपछि दिनहरू केही शुन्यतामा वितिरहेको छ । सामान्य रूपमा आफूले पढ्ने, लेख्ने र आफ्नो व्यक्तिगत पढाइ र लेखाइ चल्दै छ ।
(ख) विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी हुन्छ कि नाइँ ?
उत्तर ः विद्यार्थीहरूसँग सामान्य कुराकानी भैरहन्छ । सुखदुखको कुरा हुन्छ । कोरोनाको बारेमा पनि अलिअलि कुराकानी हुन्छ । विद्यार्थीहरूले पढाइको कुरा गर्छन् । उनीहरूलाई केवल परीक्षाको मात्रै चिन्ता रहेको छ । नत्र उनीहरू निर्धक्कसँग आफ्नै घरमा बसिरहेका छन् ।
(ग) स्कुल नगएको पनि धेरै समय वितिसकेको छ । स्कुल आउनका लागि कुनै दबाब पनि आउँछ कि ?
उत्तर ः स्कुलबाट पटकपटक फोन आइरहन्छ । विद्यालयमा भएका हरेक गतिविधिको बारेमा प्रधानध्यापकले जानकारी गराइ रहनुन्छ । बेला बेलामा स्कुलमा फोन सम्पर्क भैरहन्छ ।
(घ) अबको साहित्य कस्तो हुनुपर्छ ?
उत्तर ः साहित्य मानिसको मन मतिष्ककमा छुने कला हो । अबको साहित्य मानिसलाई उत्प्रेरणा दिने खालको हुन जरुरी छ । साहित्यले समाज परिवर्तनका लागि दौडनुभन्दा पनि पहिला मनलाई साहित्यको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ ।
(ङ) तपाईँ कुनकुन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ ?
उत्तर ः म विशेषगत साहित्य लेख्नुभन्दा पनि साहित्यलाई मन पराउँछु । कहिलेकाहिँ गजल, मुक्तक र कविता पनि लेख्ने गरेको छु ।
(च) अहिलेको साहित्य कस्तो लाग्छ ?
उत्तर ः स्थापित सिद्धान्तलाई परिवर्तन गरेर साहित्यले आफ्नो छुट्टै बाटो र पहिचान खोजिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति १३ भाद्र २०७७, शनिबार ११:५०